ढोका-ढोकाको प्रचार​—⁠के यो कामले तपाईंहरूलाई उद्धार दिन्छ?
लेखको भाषा अङ्ग्रेजी अजरबैजानी अजरबैजानी (सिरिलिक) अफ्रिकान्स अरबी अल्बेनियन आइसल्याण्डिक आम्हारिक आर्मेनियन आर्मेनियन (पश्‍चिमी) आसामी इग्बो इटालियन इन्डोनिसियन इबान इलोको इसोको ईवी उइघुर (सिरिलिक) उङ्गान्गेला उज्बेक उन्डुबेली उन्डुबेली (जिम्बावे) उर्दू एफिक एस्टोनियन ओरोमो ओसेसियन कन्नडा कम्बोडियन करेन (गः) काचिन काजाक काबाइली काबीय किकाम्बा किकोंगो किन्यारवान्डा किम्बुन्डु किरून्डी किसी किसोंगे कोंगो कोरियन क्याटालान क्यानगोन्डे क्रिओ क्रोएसियन क्वान्गाली क्वान्यामा क्वेचा (आयाकुचो) क्वेचा (कुज्को) क्वेचा (बोलिभिया) क्षोसा गा गाउरानी गारीफुना गालिसियन गुजराती गून ग्रीक ग्रीनल्यान्डीक चिचेवा चिटुम्बुका चिटोंगा चिटोंगा (मलावी) चिनियाँ म्यान्डरिन (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (सरल) चीन (हाका) चुभास चेक चोल जर्जियन जर्मन जापटेक (इस्मस) जापटेक (लाचिगुइरी) जापानी जाभानिज जुलू झेल्तल टगालोग टर्किश टाटार टिग्रिन्या टेटन डिली टोंगन डच डाँग्मे डिगोर डेनिश ड्रेहु ताङ्काराना ताजिकी तामिल तारास्कान ताहिटी तेलगु तोक पिसिन तोजोलबल तोतोनक त्लापनेक त्वी त्सोंगा थाई नजेमा नर्वेली नाह्वाटल (उत्तरी पुएब्ला) नाह्वाटल (ग्वेरेरो) नाह्वाटल (वास्टेका) नाह्वाटल (सेन्ट्रल) निआस नेपाली नोंगा पंगासिनन् पंजाबी पापियामेन्टो (अरुबा) पारसी पोर्चुगिज पोलिश फान्टे फिजियन फिनिश फेरोई फ्रान्सेली बंगाली बाटाक (टोबा) बाश्कीर बासा (क्यामरून) बास्क बिस्लामा बुल्गेरियन बोउलो बोस्नियन भलेन्सियन भियतनामिज भेजो भेन्डा मझतेक (हुआट्ला) मराठी मले मल्यालम मापुडुङ्गुन माम मालागासी माल्टिज मिहे मूर मेन्डे म्यानमार म्यासडोनियन युक्रेनियन योरूबा रारोतोंगान रूसी रोमानियन लाट्भियन लाम्बा लिंगाला लिथुआनियन लो जर्मन वलिसियन वेल्श शोना सर्बियन सर्बियन (रोमन) सामोअन सिंहला सिबेम्बा सिलोजी सेत्स्वाना सेपेडी सेबूआनो सेसोथो (लेसोथो) सोट्सेल सोलोमन टापु पिजिन स्पेनिश स्लोभाक स्लोभेनियन स्वाती स्वाहिली स्वाहिली (कंगो) स्विडिस हंगेरियन हाइटियन क्रिओल हिन्दी हिब्रू हिलिगेनोन हौसा
के यहोवाका साक्षीहरू ढोका-ढोकामा प्रचार गर्न गएर उद्धार पाउन खोज्दै छन्‌?
अहँ, होइन। हामी नियमित रूपमा ढोका-ढोकामा गएर प्रचार त गर्छौं तर यो कामबाटै उद्धार पाउन सकिन्छ भनेर चाहिं विश्वास गर्दैनौं। (एफिसी २:⁠८) किन?
यो उदाहरण विचार गर्नुहोस्। एक जना दयालु मान्छेले सबै जनालाई एकदमै महङ्‌गो उपहार दिन्छु भनेर प्रतिज्ञा गरेको छ। तर त्यो उपहार पाउन उसले भनेकै दिनमा एउटा ठाउँमा पुग्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईं त्यो मान्छेको प्रतिज्ञामा विश्वास गर्नुहुन्छ भने उसको निर्देशनअनुसार गर्नुहुन्छ नि, होइन र? आफ्नो साथीभाइ अनि परिवारका सदस्यहरूले पनि त्यो उपहार पाऊन्‌ भनेर तपाईं त्यसको बारेमा तिनीहरूलाई पनि बताउनुहुन्छ होला। तर त्यो मान्छेको निर्देशनअनुसार गर्दैमा तपाईंले त्यो उपहार पाउनै पर्छ भनेर दाबी गर्न त मिल्दैन। किनभने त्यो उपहार तपाईंले केही काम गरेको बदलामा दिइने होइन।
त्यसैगरि परमेश्वरप्रति आज्ञाकारी मानिसहरूलाई अनन्त जीवन दिन्छु भनेर उहाँले गर्नुभएको प्रतिज्ञामा हामी यहोवाका साक्षीहरू विश्वास गर्छौं। (रोमी ६:२३) अरू मानिसले पनि परमेश्वरको यस प्रतिज्ञाबाट लाभ उठाऊन्‌ भन्ने चाहना भएकोले हामी यसको विषयमा अरूहरूलाई बताउन सक्दो गर्छौं। तर यसरी प्रचार गर्दैमा उद्धार पाइहाल्छौं भनेर हामी विश्वास गर्दैनौं। (रोमी १:१७; ३:२८) परमेश्वरबाट त्यत्ति ठूलो उपहार पाउन लायकको कुनै पनि काम मानिसले कहिल्यै गर्न सक्दैन भनेर हामीलाई थाह छ। बाइबल यसो भन्छ: “ उहाँको स्तरबमोजिम हामीले गरेका असल कामहरूको कारण होइन तर उहाँको कृपाद्वारा उहाँले हामीलाई उद्धार गर्नुभयो। ”​—⁠तीतस ३:⁠५.
यहोवाका साक्षीहरू किन ढोका-ढोकामा गएर प्रचार गर्छन्‌?